Af Waakow May Liki Aamee?? – Rasaasa News
Af Waakow May Liki Aamee??
May 12, 2009 Jwxo-shiil
Waxaa aad iiga yaabiyay wiilkan yar ee webka la yidhi haleelo wax ku soo qoro. Waxaan arkaa in uu xaqiiqadda ka dhacsan yahay oo waxa loo sheego oo inta badan beenta ku salaysan in uu saxaro ku walaaqo akhristyaasha wakhtiga kaga dhuminaya.
Sidda website-yadda loogu soo qoray waxaa shirweyn oo aad loo soo abaabulay ka dhacay magaaladda Nairobi. Shirkaa waxaa qabtay Jaaliyadda JABSO oo Guddoomiyaheedda la wada yaqaano.
Ninka ay Haleelo sheegayso oo magaciisa la yiraahdi Shafeec wuu jiraa, laakiin guddoomiye iyo wax u dhaw toona kama aha Jaaliyadda JABSO. Waxa jirtay in sannadkii 2008 bishii Juun mar loo doortay Shafeec in uu Jaaliyadda Guddoomiye u noqdo. Maalmo ka dib, waxaa dhacday in ay Xubnahii Guddiga Jaaliyadda kula jiray intoodda badan ay iska casileen xilalkoodii.
Xubnaha JABSO oo u adkaysan waayay nidaam xumadda iyo fara galinta JWXO-shiiladda ayaa mar kale shir weyn isugu yimid, oo ay halkaa ku sameeyeen Guddi cusub. Guddiga cusub ee la doortay wuxuu markiiba bilaabay in uu Ururiyo Xubnahii dhibaatada oo xadgudubyada aan caadi ahayn loo gaystay.
Siddoo kale waxay dadka intiisa badan arkeen in aan lakala saari karin JWXO-shiiladda iyo dadka ay Tigreyga u soo dirsadeen magaaladda Nairobi. WakiilkaJWXO-shiil u fadhiyay Nairobi Mr. Abdirizakh Tiibaa iyo Abdi Bile wax firqi ah oo u dhexeeyay ma uusan jirin. Shacabka iyo Jaaliyadda JABSO waxay ku baraarugeen inay marnaba noqon karin JWXO-shiiladda Jabhad si dhab ah oola dagaalami karta Gumaysiga Itoobiya. Iyada oo halkaa laga taabo qaadayo, ayay Jaaliyadda JABSO si toos ah gacmaha ugu fidisay Jabhadda saxda ah ee xoriyo doonku dhabta ka tahay ee uu hormuudka ka yahay Golaha Sare ee JWXO.
Marka ay xaaladu ku xumaatay, ayay bilaabeen inay gacanta ka hadlaan, oo shacabka kii ka soo horjeedaba toori ku handadaan. Ahmed Shahaad isagoon iska war moog ah, waatan Shafeec toori isagoo doonayo in uu dhuunta ka galiyo, gacanta isaga qabtay, oo lix jeer la tolay. Taa waxay keentay in uu Dambiile Safeec maalmo dhan ku dhuumaalaysanayay nawaaxiga Nairobi, isaga oo ka baqayo in ay booliska Keenyaatiga ay gacan ku dhigaan.
Shafeec oo gacan ku dhiigle ah, oo aan Jaaliyadda JABSO wax sumcad ah haba yaraatee uusan ku lahayn, ayuu haatan wiilkan yar oo caqliga la’a oo la yidhi wax buu ku qoraa webka haleelo kaga been abuurayaa xaqiiqadda dhabta ah ee ka jira Geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya.
Shafeec ma laha dabeecad uu Guddoomiye ugu moqon karo Jaaliyad, markii horana waxaa meesha keenay Dr. Dolal oo ku taliyay in isaga Guddoomiye looga dhigo Jaaliyadda JABSO, markii dambana isla Dr. Dolal ayuu ahaa ninkii ugu horeyey ee arkay in uusan Shafeec umad hogaamin karin.
Afweyni iyo Been raad la’aan ah waa lagu yaqiinay Haleelo, balse yaa weydiinaya qiimaha karooratee. Mar been laguugu bartay, waligii beenlow.
Qore: Abdirashid Jama
Maamulkii Kismaayo oo Gudi ku Meel Gaadh ah Lagu Wareejiyay
Mogadishu mired in fresh mayhem